Jiliyeyaasha ugu fiican jardiinooyinka
Ujeedada jardiinadu waxay u egtahay inay kujirto waxyaabo badan oo qodis ah iyo qodid iyo carrada hareeraha ciidda, badiyaa laxiriirta ka saarista haramaha ama gogosha jilicsan. Had iyo goor way fiican tahay in la dhawaado ficil ahaan intii suurtagal ah, taas oo micnaheedu yahay in munaasabado badan lagaaga baahan doono inaad ku qabato howlaha beertaada afarta dhinacba. Jilibyada jilicsan ee jirku si naxariis darran ugama qaataan ciqaabta noocan ah, gaar ahaan haddii dhulka aad ka shaqaysaa aanu sinnayn, qoyan ama dhagax ah, oo ayan wax xanuun ahi u dhicin sida jilba-goysyada jilicsan (dariiqa dariiqa darrooyinka ah ee nasiib darrada ah) .
Wixii raaxo leh, beero-heer hoose ah (oo aan lagu xusin ka-ilaalinta surwaalkaaga wasakhda carrabka ah) waa jilib aad u baahan tahay, oo waxaan tijaabinay sida ugu fiican, oo ay ku jiraan labada jilib ee taagan iyo jilib-goysyada. Si loo jilciyo jilbahayaga waxaan ku talin lahayn jilibyada siiya ilaalin wanaagsan, waari kara oo si wanaagsan u xoqmay ka dib maalin adag oo ciidda dhex jiifa.
Jilibkan afkuu ka sameysan yahay ee jaban wuxuu u raqiisan yahay jajab. Waa taabasho dhinaca khafiifka ah, waxay leedahay jahawareer aan caadi ahayn, naqshad aasaasi ah (waxay umuuqataa jeexan midho leh oo rooti cagaaran ah), laakiin waxay qabataa shaqo cadaalad ah inaad isku dubarideyso macmacaankaaga markaad jilbaha dhulka dhigeyso - dabcan, lama tartami karo raaxada xulashooyinka qiimaha badan ee liiskaan. Waa nadiif-nadiif oo waxay gacanta ku haysaa markii aad ku dhex wareegeyso jardiinada. Ereyga ku qoran baakada wuxuu sheegayaa 'in aan loo adeegsan aalad sabayn', markaa ka diga bisadaada isticmaal jilibkan sida barkad loo isticmaalo.
Tani waa qiimo wanaagsan, jilib jilicsan oo jilicsan oo leh qaanad qaro weyn oo qaali ah oo u oggolaaneysa meel badan oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqa jilibka. Ka dib roobab mahiigaan ah, jilibkeena jilicsan ayaa si dhakhso ah u engejiyay, diyaarna u ah ficil dheeraad ah oo bannaanka ah. Waxaa laga sameeyay xumbo 'EVA', oo lagu daboolay neo Loose Water-ka, waa iftiin sidoo kale, sidaa darteed waxaad si sahal ah ugala wareegi kartaa jardiinada saaxiibbadaada beerta si ay u isticmaalaan haddii wicitaanku soo baxo. Jardiinooyinka-moodada miyir-qabka leh ayaa ku farxi doona inay ogaadaan in jiliblayaashani ay ku yimaadaan toddobo midab, min caato ah ilaa casaan kulul.
Waqtiga boostada: May-11-2020